UPDATE: Maxaa sabab u ah dib u dhaca ku yimid ku dhawaaqista Xildhibaanada baarlamaanka Galmudug? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Maxaa sabab u ah dib u dhaca ku yimid ku dhawaaqista...
UPDATE: Maxaa sabab u ah dib u dhaca ku yimid ku dhawaaqista Xildhibaanada baarlamaanka Galmudug?
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Warar goor-dhow soo gaaray warbaahinta Halqaran.com, ayaa sheegaya, in uu dib u dhac ku yimid ku dhawaaqista xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug, sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinka Galmudug.
Waa markii labaad ee uu Fashilmo Jadwalka ay soo saareen Guddiga doorashooyinka maamulka Galmudug.
Wararka ay helayso Halqaran.com ayaa intaasi ku daraya, in Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya uu ku howlan yahay sidii loo xalin lahaa Khilaaf xooggan oo ka taagan soo xulista Xildhibaanada Galmudug.
Qaar ka mid ah beelaha deegaannada maamulka Galmudug ayaa horay walaac uga muujisay guddiga doorashooyinka maamulka Galmudug.
Tani ayaa noqoneysa markii labaad ee uu guddigan ku fashilmo dhowrista jadwalka doorashada maamulka Galmudug. Ilaa iyo hadda lama hubo sida ay u fulin doonaan hawlaha kale ee horyaalla guddigan.
dib u dhac ku yimid ku dhawaaqista xildhibaanada baarlamaanka Galmudug
wararkii ugu dambeeyay Somaliya